<<first <prev 1 (2)34 next> last>>
Posted By - Ko Ko - May 30, 2008
The site named [Web Developers Handbook] collectedalot of useful sites relating to web developement. Its seems to bearegularly updated site. Enjoy
Web Developement လိုက်စါး သူများ သိသင့်သော site တစ်ခု။ Internet ထဲတွင် website ရေးသူ များ သိထား သင်သော website တစ်ခုမှာ http://www.alvit.de/handbook/ ဖြစ် ပါသည်။ အောက်ပါ ခေါငိးစဉ် များဖြင့် ရာနှင့် ချီသော websites links များကို ဖေါ်ပြ ပေးထား ပါသည်။ ၄င်း website တင်ထား သူ web master အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်… more....
Posted as - [web developement] [Resources]
Posted By - Ko Ko - Dec 28, 2006
How to use the function echo
Using the function 'echo'။ ပရိုဂရမ် တခုကို run လုပ်တဲ့ အခါ ဘယ်လောက် ပဲ ရှုပ်ထွေး တဲ့ ပရိုဂရမ် ဖြစ်နေ ပါစေ၊ နောက်ဆုံး မှာ ရလာဘ် အဖြေ တခု ကို return ပြန် ပို့ပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီအခါ မှာ programmer ဟာ အောက်ဖေါ်ပြ ပါ လုပ်ဆောင် ချက် တခုခု ကို အများ… more....
Posted as - [programming] [php]
Posted By - Ko Ko - Jan 5, 2007
How to use -single quote- and -double quote- with strings in PHP
PHP strings များတွင် 'single quote' နှင့်� 'double quote' တို့အား အသုံး ပြုပုံ။ စာလုံး အက္ခရာ အတွဲလိုက် အစုအဝေး များ ကို PHP တွင် string ဟု ခေါ်ပါ သည်။Strings များတွငိ အောက်ပါ တို့ ပါဝင် ပါသည်။ စာလုံး အက္ခရာ များASCII သင်္ကေတ များနံပါတ် များvariables များစာလုံး အက္ခရာ အတွဲ (strings) များ… more....
Posted By - Ko Ko - Dec 17, 2006
Web Developement Seminar Organized By NaviStar Myanmar.
Php ပရိုဂရမ်မင်း အကြောင်း ဟောပြောပွဲ။ မြန်မာပြည် တွင် ပထမ ဆုံး ပြုလုပ် သည်ဟု ယူဆ ရသော "PHP Programming" အကြောင်း ဟောပြော ပွဲ ကို ရန်ကုန်၊ လှိုင်မြို�့ နယ်၊ MICT Park တွင် ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ အချိန် တွင် ကျင်ပ ပြုလုပ် ခဲ့ ပါသည်။ NaviStar Myanmar… more....
To getalot of information of the installed PHP server usingabuilt in function
သင့် server ပေါ်ရှိ Php ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ကြည့် ခြင်း Php code တကြောင်းထဲ ရေး ရုံနဲ့သင့် server ပေါ် မှာ run လုပ်နေတဲ့ Php ရဲ့ information စာမျက်နှာ ၄-၅ ရ့က် လောက် ခေါ်ကြည့် လို့ ရပါ တယ်။ အောက်ပါ code ကို notepad မှာရေး ပြီး phpinfo.php ဆိုတဲ့ file name… more....
Processing time -- 0.0306 seconds.